TRA VINH - Cochinchina - Dhulka Barakaysan ee Daraasadaha Vietnam
I. Juqraafi ahaaneed
Gobolka Travinh [Trà Vinh] waxaa waqooyiga ku xigo gobolka Co Chien [Cổ Chiên], koonfurta oo ku taal gobolka Bassac [Bassac], dhanka bari dhanka bari bariga iyo galbeedka gobolada Vinhlong [Vĩnh Long] iyo Cantho [Cần Thơ] wuxuuna ka kooban yahay 2.000 oo kilomitir oo laba jibaaran.
Sida gobollada deriska ah, Vinhlong [Vĩnh Long], Bentre [Bến Tre] iyo Soctrang [Sóc Trăng], ciidda gobolka Travinh [Trà Vinh] waxaa sameeyay kaydiyadii Co Chien [Cổ Chiên] iyo kuwa Bassac [Bát Sắc] iyo ciidda oo ay kaydsadaan culeyska sareeya inta lagu jiro Monsoon-waqooyi-bari. Waxaa jira isku xigxig dhul jiif ah oo hooseeya oo ay sameeyeen minjo isku urursan iyo galmada bacaadka ah. “Giongs”[Giòng] waxaa loola jeedaa dhaadheer dhaadheer oo ciid ah, oo ku fidsan gobolka, ciid wanaagsan oo ku habboon dalagyada kala duwan. Dastuurka juqraafi ee carradu waa mid loo wada dhan yahay.
Muuqaalka guud ee gobolka ayaa ah muuqaalka weyn, oo isku xira durdurrada iyo kanaalada, dhul kor u kaca ahna ma jabinayo daarta.
Gobolka waxaa soo maray wadooyin muhiim ah, sida:
Wadada ka socota Travinh [Trà Vinh] ku Bactrang [Bát Trang], Wadada Wadnaha 35
Gaadhiga [Trà Cú], Wadada Wadnaha No. 36
Bat Bat [Mặc Bát], wadada maxalliga ah No. 6
Vinhlong [Vĩnh Long], wadada 7-aad
Maalka ugu weyn ee gobolka Travinh [Trà Vinh] waa bariis, sida ugu fudud ee qayb dhan oo ka mid ah Cochin-China. Wax warshado ah kuma jiraan gudaha Travinh [Trà Vinh] weli, ganacsiguna wuxuu ku jiraa gacanta Shiinaha. Caawinta meelaha bannaan ee ku filan waxay ka hortagtaa taranta xoolaha, iyo lo'da waxaa laga keenay Kambodiya. Dadka deggan qaybta u dhow Badda Bariga waxay naftooda u huraan Ashing, laakiin waxay dhoofiyaan tiro aad u yar oo kalluun iyo shrimbus ah.
(…) Socdaalka reer Annamites wuxuu ku bilaabmay qaxii Gia Long [Gia Long] si looga adkaado Cochin-China… Sanadkii 1872 kacdoon nevv ah, oo ka dhan ah Faransiiska, ayaa qaab aad u firfircoon lagu dejiyey Doc Phu Tran Ba ​​Loc [Đốc Phủ Trần Bá Lộc]. Ilaa iyo wakhtigaas nabaddu weligeed ma joogsan inay xukunka ku jirto Travinh [Trà Vinh].
1: Marcel Georges Bernanoise (1884-1952) - Rinjiraha, wuxuu ku dhashay xaafadda Valenciennes - oo ah gobolka ugu hooseeya waqooyiga Faransiiska. Soo koobid nolosha iyo shaqada:
+ 1905-1920: Ka shaqeynta gudaha Indochina oo mas'uul ka ahaa howsha Gudoomiyaha Gobolka Indochina;
+ 1910: Macalinka Dugsiga Far East School ee Faransiiska;
+ 1913: Barashada farshaxanka asaliga ah iyo daabicista dhowr maqaal oo cilmiyeed;
+ 1920: Wuxuu ku noqday Faransiiska wuxuuna soo abaabulay bandhigyo farshaxan ah magaalada Nancy (1928), Paris (1929) - sawirro muuqaal ah oo ku saabsan Lorraine, Pyrenees, Paris, Midi, Villefranche-sur-mer, Saint-Tropez, Ytalia, iyo sidoo kale xusuusno qaarkood oo ka yimid Bariga Fog;
+ 1922: Daabacaadda buugaagta Farshaxanka Qurxinta ee Tonkin, Indochina;
+ 1925: Waxay ku guuleysteen abaalmarin weyn Bandhiggii Gumeysiga ee Marseille, waxayna iskaashi la sameeyeen naqshadeeyaha Pavillon de l'Indochine si loo abuuro waxyaabo gudaha ah;
+ 1952: Waxay dhimataa da'da 68 waxayna ka tagtaa tiro badan oo sawirro iyo sawirro ah;
+ 2017: Aqoon isweydaarsiga rinjiyeynta ayaa si guul leh ku bilaabatay farcankiisa.
"Buug"LA COCHINCHINE”- Marcel Bernanoise - Hong Duc [HĐứng Đức] Daabacayaasha, Hanoi, 2018.
Words Erayada Farta Farta Fiyatnaamiska ee sida muuqata loo beeniyay waxaa lagu dhejiyay gudaha calaamadaha oraahda - waxaa dejiyay Ban Tu Thu.
◊ CHOLON - La Cochinchine - Qaybta 1
◊ CHOLON - La Cochinchine - Qaybta 2
(Booqday jeer 1,028, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 1,915
← BADBAADADA SOC - Cochinchina
TAARIIKHII GUUD EE VIETNAMESE Qorista - Qaybta 1 →
Comments Off Beesha LA CHI Community oo ka kooban 54 qowmiyadood oo Vietnam ah